Diiwaanka Dabagalka - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
22 2011 karaa
Yaa ilaaliya waardiyayaasha. Ololaha ka hortagga dabagalka
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 22. May 2011
iyo United Stasi America wuxuu istaagay derbiyada Safaaradda Mareykanka ee Berlin iyo qunsuliyadaha kale ee Mareykanka ee Jarmalka, oo ay ku jiraan Dusseldorf, Frankfurt iyo Hamburg. Sababta tani waa jahwareer la'aanta ah ee ku saabsan NSA iyo adeegga qarsoodiga Maraykanka.
Yaa ilaaliya waardiyayaasha. Ololaha ka hortagga dabagalka Abriil 21st, 2020Oliver Bienkowski